» दोहोरीमा कसको जीत ? प्रितम र जालुमाया कि सरोज र सिता ?
दोहोरीमा कसको जीत ? प्रितम र जालुमाया कि सरोज र सिता ?
२ श्रावण २०७८, शनिबार १९:५९
मकवानपुर, २ साउन । नेपालकै चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को उत्कृष्ट १६ छनौटपछि पहिलो दोहोरी भिडन्त भएको छ । पहिलो दोहोरी भिडन्तमा जालुमाया गुरुङ र प्रितम पोख्रेलसँग सरोज सिम्खडा र सिता घिमिरेले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनीहरुको प्रस्तुति पश्चात निर्णायकहरुले दिएको अंकबाट ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत दर्शक भोटको आधारमा यही शनिबार रिजल्ट हुनेछ । यी दुबै जोडीहरु गायक गायिकाकै रुपमा चिनिएका र लाईभ दोहोरीमा दर्शकहरुको मन जित्न सफल जोडीहरु हुन् । दुबै टिम बलियो भएकोले एकअर्कालाई पछि पार्न यो जोडीहरुले दमदार दोहोरी भिडन्त गरेका थिए । यी दुई जोडीको यो कडा प्रतिस्पर्धामा कसले बाजी मार्ला त ? आखिर को जानेछ उत्कृष्ट ८ मा ? तपाईको विचारमा यी दुई जोडीमध्ये कुन जोडीको जित्ने सम्भावना बलियो छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
यी दुई जोडीहरुको दोहोरी भिडन्तपश्चात निर्णायकहरुले दुबै टिमको प्रशंसा गरेका थिए । उनीहरुलाई गोप्य रुपमा निर्णायकहरुले अंक दिनुका साथै मुल्यांकनका लागि स्टार समेत दिएका थिए । प्रितमलाई सबै निर्णायकहरुले थ्री स्टार दिएका थिए । त्यस्तै सितालाई सबै निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए । जालुमायालाई निर्णायक प्रजापति पराजुलीले थ्री स्टार र अन्य ३ जना निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए । त्यस्तै सरोजलाई निर्णायक सिता थापाले फो स्टार र बाँकी ३ जना निर्णायकहरुले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । स्टारहरुको आधारमा हेर्ने हो भने सिता घिमिरेको दोहोरी सबैभन्दा दमदार भएको देखिन्छ । दर्शकहरुको भोटका आधारमा पनि निर्णय हुने भएकोले यी दुबै जोडीहरुमध्ये कुन जोडीले जित्लान् भनेर शनिबार मात्र थाहा हुनेछ ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट १६ मा पुगेका तेस्रो जोडी हुन् जालुमाया गुरुङ र प्रितम पोखरेल । जालु र प्रितमको जोडीले यसअघि शर्मिला बिसी र यज्ञ भट्टराईको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनीहरुले निर्णायकबाट जम्मा ५८२ अंक प्राप्त गर्दै ४ अंकको अन्तरमा दोहोरी भिडन्त जितेका थिए । प्युठानमा जन्मिएका प्रितम अहिले परिवारसँगै दाङको देउखुरीमा बस्छन् । आमा, २ जना भाई र दिदीसँगै बस्दै आएका प्रितमको परिवारमा अहिले जम्मा ५ जना छन् । सानैदेखि गीतसँगीतमा रुचि भएका प्रितमले विद्यालय, गाविस र जिल्ला स्तरका गायन प्रतियोगिताहरुमा भाग लिँदै संगीतको क्षेत्रमा अगाडि बढेका हुन् । औपचारिक रुपमा वि.सं. २०७४ सालमा काठमाडौँमा आएर संगीत क्षेत्रमा लागेका प्रितम लाईभ दोहोरीमा र लोकदोहोरी गायनका क्षेत्रमा चर्चित छन् । त्यस्तै प्रितमसँग जोडी बाँधेर दोहोरी च्याम्पियनमा भिडिरहेकी जालुमाया गुरुङ रोल्पाको लिवाङ नगरपालिका वडा नम्बर ४ गुरुङ गाउँका हुन् । रोल्पाको विकट गाउँमा जन्मिएकी जालुमायाले गुरुङ समुदाय र मगर समुदायमा आफ्नो बाल्यकाल बिताएकी छिन् । आफुलाई खासै बोल्न नआउने व्यक्तिका रुपमा चिनाउने जालुमाया लोकदोहोरी क्षेत्रमा चर्चित छन् । उनी लाईभ दोहोरीका साथै लोकदोहोरी गायनका क्षेत्रमा चर्चित गायिका हुन् ।
त्यस्तै दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट १६ मा पुगेका नवौँ जोडी हुन् सरोज सिम्खडा र सिता घिमिरे । उनीहरुले यसअघि सुनिता बुढा र मानसिंह खड्काको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनीहरुले निर्णायकबाट जम्मा ५७५.५ अंक प्राप्त गर्दै ३ अंकको अन्तरमा दोहोरी भिडन्त जितेका थिए । यसअघिको दोहोरी भिडन्तमा प्रशंसा कमाएका सरोज सिम्खडा लोकदोहोरी गायक हुन् । धादिङको विकट क्षेत्रमा जन्मिएका सरोज लोकदोहोरीकै क्षेत्रमा केही गर्ने उदेश्य सहित काठमाडौँमा प्रवेश गरेका थिए । लामो समयदेखि दोहोरी गायनमा सक्रिय रहेका सरोजले अहिलेसम्म सोचेको जस्तो सफलता नपाएको बताउँछन् । उनी दर्शकहरुको माया नै कलाकारहरुको लागि अगाडि बढ्ने हौसला भएको बताउँछन् । सरोजसँगै जोडी बाँधेर दोहोरी च्याम्पियनमा भिडिरहेकी सिता घिमिरे पाल्पाकी हुन् । वि.सं. २०७३ सालमा औपचारिक रुपमा साँगितिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी सिताले गायनमा लामो संघर्ष पनि गरेकी छिन् । उनले गायन क्षेत्रमा लाग्न श्रीमान र घरपरिवारबाट पनि निक्कै साथ पाएकी छिन् । उनी लोकदोहोरी गायिकाका रुपमा चर्चामा छिन् । हेनुृहोस् भिडियो सामग्री-